WADIIQOOYINKA BEERTA DIY: SAMAYNTA FOOMAM CAAG AH, SAWIRRO QORYO IYO LA TAABAN KARO - DHISMAYAASHA
Wadiiqooyinka beerta ayaa ka badan kaliya xarigga dabaysha oo kuu ogolaanaya inaad si fudud ugu dhaqaaqdo beerta.
Waxay qaadataa ma aha oo kaliya hawlkarnimada, laakiin sidoo kale waa qayb ka mid ah qurxinta of your site.
Sidaa daraadeed, waa mid aad u muhiim ah in muuqaalkoodu uu ku haboon yahay qaabka guud ee muuqaalka.
Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad si taxaddar leh u tixgeliso meesha iyo sida loo dhigo raad raac, iyo ugu muhiimsan, go'aaminta jihada, ujeedka iyo naqshadooda. Sida caadiga ah, guriga waxaa loo qaadaa sidii barta laga bilaabi lahaa, wadada ugu weynna waa la dhigayaa iyada oo aan loo baahnayn.
Sida loogu talagalay waddooyinka beerta ee loogu talagalay socodka ku wareegsan xayndaabyada ama dhagaxyada, waxay u fiicantahay in lagu dhajiyo.
Beerta lo'da ee dayrta - talooyinka in dhammaan bannaanka u janjeersaday.
Baro dhammaan faahfaahinta xoqitaanka cherry macaan oo ah http://rusfermer.net/sad/plodoviy/uxod/obrezka-chereshni-letom-pervaya-posleduyushhaya-isozavershayushhaya.html.
Eeg halkan sawirrada geedka canabka ah.
Dariiqyada beerta laga soo bilaabo
Qalabka ugu caansan ee waddooyinka beerta waa mid la taaban karo. Boorsada waxaa sidoo kale laga dhigi karaa dhagax la taaban karo ama dabiici ah. Mararka qaarkood, qof aan aqoonin gaar ah, ma ogaanayo faraqa u dhexeeya iyaga.
Thanks to technology casriga ah, la taaban karo si buuxda u dayac tiran yahay dhagax dabiiciga ah, iyo waa ka jaban yahay.
Sidoo kale, wadooyin la taaban karo ayaa laga sameeyaa caasimadda meelahaas oo culeyska sare loo qaadanayo.
Ujeedooyinkaas, sariirta qotoma waxaa lagu qodaa, qiyaastii 15 cm. Meelaha lagu ururiyo biyaha kulul ama biyaha roobka ayaa lagama maarmaan u ah in la hubiyo dheellitirka.
Qeybta hoose ee sariirta ku shubtay ciid, kaas oo loo siman yahay oo si hufan.
Lakabyadaasi waa in aanay ka badnayn 5 cm, dhinacyada saqafka waxaa lagu sawiray cajalad gaar ah, laakiin haddii aaney jirin, waxaa lagu bedeli karaa qashinka qubayska ama qalabka saqafka ah ee lagu shubo tuubooyinka.
Badanaa saldhiggan ayaa lagu saleeyay heerka dhulka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad ka dhigto waddada beerta ka sareeya, ka dibna loogu talagalay qaabka ay isticmaalaan kuraasto ama strips of plywood laminated.
Si looga fogaado burburka salka la taaban karo waxa uu ku qalabeeyaa meelo kulul, ama la xoojiyo.
Waxaan u dhisnaa si xor ah oo ah xayndaab xayawaan ah oo geedo ah.
Baro sida loo sameeyo trellis ah fuulista dhirta //rusfermer.net/postrojki/sadovye-postrojki/dekorativnye-sooruzheniya/stroitelstvo-shpaler-dlya-vinograda-svoimi-rukami.html.
Wadooyinka laga helo dhagax dabiici ah, dhagax ama dhagax la jajabiyey
Maxay noqon karaan kuwo qurux badan oo quruxda dabiici ah? Wadooyinka laga sameeyay dhagaxa dabiiciga ah waxay u muuqdaan kuwo weyn oo ay ka mid yihiin waxyaabaha ay ka mid yihiin dhagaxyada, dhagaxyada dhagaxyada iyo darbiyada xajiya. Taasi waa, meel kasta oo ka mid ah dhismaha beerta waxaa jira dhagax. Tallaabooyinka noocan oo kale ah waa kuwo aad u fudud in aad naftaada sameysid.
Waa ku filan tahay in la dalbado dhagax oo ku dul saaro biyaha diyaarka ah ee u dhow, ama masaafada u dhexeysa dhagaxyada, ka dibna waxaa lagu buuxiyaa jajab dhagax yar ama dhagaxyo.
Isku darka, dhagxan la jajabiyey ama dhagaxyada ayaa si fiican ugu dhajinaya, ma aha oo kaliya raqiis, laakiin way sahlan tahay in lala shaqeeyo.
Waxay si fiican ugu habboon yihiin qaab kasta oo naqshad muuqaal leh oo si fiican loogu daro naqshad beerta.
Tusaale ahaan, beerta qaabka quraacda, dhulalka yar yar ee qaxwada ayaa ah mid caadi ah, oo leh qaab sawir ah oo lagu sameeyey. Farsamooyinka noocan oo kale ah waxay bixiyaan beerta muuqaal ah oo muuqaal ah oo cajiib ah.
Wadiiqada beerta laga soo gooyo jir iyo geed
Qaar badani waxay noqotaa helitaan dhab ah oo ah in waddooyinka qalabka aan la taaban karin sida gooyooyinka iyo geedaha geedo lagu arko geedo qurxin kara qurxiyo ama xagaaga xagaaga.
Si aad u abuurto dariiqa aad adigu u baahan tahay, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso sawir xoog leh, saliid qallalan, filim balaastik ah iyo geedka sawir leh. Kadibna waxaan sii wadi doonaa inaan sawirrada ku sawirno wareegyada yar yar, dhumucdiisuna waxay noqon doontaa 10-15 cm.Waxay noqon doontaa mid wax ku ool ah si loo eego haddii dhexroorka dogobku ka duwan yahay.
Heerka xiga ee shaqada wuxuu kululeyn doonaa saliidaha qalajinta karkarinta iyo daboolida dhammaan wareegyada. Iyadoo wareegyada ay qalajinayaan, waxaad u baahan tahay inaad u diyaargarowdo laftiisa.
Iyadoo si cad loo qeexay balaarnta iyo meesha, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro 45 cm oo ciid ah, ku dabool dabool caag ah oo ku shub ciid. Gubashada qallalan ee qalalan ayaa lagu dhajiyaa barkad cufan oo si fiican u habaysan.
Wax yar oo xiiso leh waa jidka ka yimid barafka cabbirka asymmetrical, kaas oo siinaya muuqaal asal ah. Laakiin, haddii aad u baahatid marin xoog leh oo raaxo leh, ka dibna way ka fiican tahay inaad doorto dhagax dheer oo ballaaran.
Waxaad isticmaali kartaa jilif geed, ciid, quraarado iyo dhoobada roodhida oo wada jir ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa haboon in la ogaado in ay ka wanaagsan tahay in aanad isticmaalin wax ka badan seddex item, maaddaama ay taasi wax u dhimayso dheelitirka iyo qaylada wadada.
Golayaasha dhismaha dharka dacha alwaax.
Baro sida loo sameeyo kombuyuutarka //rusfermer.net/postrojki/sadovye-postrojki/dekorativnye-sooruzheniya/tehnologiya-sozdaniya-sadovoi-skamejki-dlya-dachi-svoimi-rukami.html.
Sida loo doorto bakayle marka aad iibsaneyso
Caleenta hilibka dorkingka ah ee digaagga - sifooyinka beerashada, sharaxa taranka
Princess Flower - Pelargonium Clara San waxay ku farxi doontaa quruxda iyo carada
Horumarinta noocyada paniculata hydrangea Grandiflora beerta
Noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah ayaa u dhigaya kuwa bannaanka u leh doorasho: midkee si loo beeray, si dalaggii ugu badnaa, iyo aragtida quruxda badan, iyo dhadhanka waa mid aad u fiican, xitaa waxay leeyihiin waqti ay cunaan khudradda macaan ee xagaaga? Dhammaan shuruudahan waxaa soo buuxiya karootada Abaco, oo hore u bislaaday midabka dhalaalaya oo dhalaalaya oo dhadhan fiican leh. Read More
Waxyaabaha kala duwan ee yaanyada "Mucjisada ciribtirka" - sifooyinka, sharaxaadda, talooyinka daryeelka